Firefox 50 yabuda | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 50 yabuda
Mushure mekushanda nesimba basa, isu tatova pano neiyo nyowani nyowani browser Firefox 50, bhurawuza ine nhau dzakakosha uye yave kuwanikwa kurodha pasi pane chero sisitimu inoshanda.
Shanduko yakanyanya kukosha iyo Firefox 50 ndeye kusanganisa mamonikisi mubrowser yeanoshanda masisitimu asina mafonti eko, kuve pakati pavo ruzhinji rweLinux anoshanda masisitimu.
Dzimwe shanduko dzinogona kuratidzwa muFirefox 50 dzine chekuita nemisoro dzakasiyana siyana, zvakadai sekuchengeteka. Shanduko yakakosha yekuchengetedza ikozvino inotiudza kuti ndeapi mafomu epassword asina kuchengeteka, nekuti izvozvi icon yekiyi padlock munzvimbo dzinofungidzirwa kuti dzakachengeteka dzinozoonekwa dzakayambuka kana isiri nzvimbo yakachengeteka.
Basa re "tsvaga mune peji" rakaverengerwa, yatinogona kutsvaga zvakadzama kune chero izwi pane peji rewebhu. Dzimwe shanduko dzine chekuita nekugadziriswa kwembugs dzakaonekwa mushanduro dzakapfuura, kuvandudzwa kwemakona ekuratidzwa uye pakupedzisira kuvandudzwa muchirongwa kuprinta mumodi yekuverenga.
Chokwadi, haina kunyanya kuchinja, asi inobatsira uye yakakosha. Semuenzaniso, kuchinja kiyi yekuyambuka mapassword Izvo zvinokutendera iwe kuti uzive kana saiti inogona kunge isina kuchengetedzeka kunyangwe iri https, chimwe chinhu chinokubatsira iwe kunyatso chenjera usati waisa password yako ipapo pane veruzhinji network kana kumwe kunhu kwavanogona kunge vachikushora.
Nezve shanduko yemasikirwo, icho chinhu chinobatsira uye chakakosha, nekuti muna 2016 mavara aya anoshandiswa zvakanyanya, iyo komputa yaisakwanisa kuratidza mune akawanda masisitimu anoshanda (yakajairika square zero yakaonekwa). Nekuda kweichi chigadziriso, dambudziko iri rinenge rakagadziriswa zvachose.
Iyo yazvino vhezheni yeFirefox 50 uyea ichave inowanikwa munzvimbo dzekuchengetera dzaunofarira kugovera uye kana zvisiri, zvichave mumaawa mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Firefox 50 yabuda
DIY: Chii chinodiwa kumisikidza online chitoro
Alienware tenda izvozvo Windows 10 ichabvisa SteamOS